China Panoramic Elevator miaraka amina fampiharana midadasika sy fiarovana avo lenta sy mpamatsy | Tianhongyi
Elevator Panoramic miaraka amin'ny fampiharana malalaka sy fiarovana avo lenta
Tianhongyi Sightseeing Elevator dia hetsika ara-javakanto izay ahafahan'ny mpandeha miakatra ambony ary mijery lavitra ary tsy mijery ny toerana tsara tarehy eny ivelany mandritra ny fiasana. Izy io koa dia manome ny fiainana toetra mahavelona, ​​izay manokatra fomba vaovao amin'ny fanahafana ireo trano maoderina.
Tianhongyi Sightseeing Elevator dia hetsika ara-javakanto izay ahafahan'ny mpandeha miakatra ambony ary mijery lavitra ary tsy mijery ny toerana tsara tarehy eny ivelany mandritra ny fiasana. Izy io koa dia manome ny fiainana toetra mahavelona, ​​izay manokatra fomba vaovao amin'ny fanahafana ireo trano maoderina. Misy ny ascenseur fitsangantsanganana manodidina sy toradroa. Ny rindrin'ny sisin'ny ascenseur dia manana vera voadio laminated roa sosona, izay ahazoana aina, azo antoka, marefo ary azo ampiharina ary toerana hijerena azy tsara.
1. Teknolojia fanaraha-maso mandroso, fahatsapana mitaingina azo antoka sy milamina ary ahazoana aina, ary zoro maro amin'ny endrika ivelany amin'ny tohatra, mitondra fahafinaretana sy sanganasa vaovao amin'ny mpampiasa;
2. Volavola iraisana izay mety amin'ny mpandeha. Ny firafitry ny vy fitaratra amin'ny ascenseur fitsangatsanganana dia tsy mampiseho fotsiny ny habaka feno, fa koa ny hatsarana amin'ny ankapobeny. Izy io koa dia azo foronina arakaraka ny asa sivily isan-karazany, izay mety sy haingana, amin'ny ankapobeny boribory, boribory, ary toradroa;
3. Fampisehoana mahasarika maso sy bokotra feno fahatsapana avo;
4. Ny lalantsara misy ny maha-olona dia ampifandraisina amin'ny tranobe sy ny tontolo manodidina, tsy vitan'ny hoe lasa ampahany amin'ny trano fotsiny, fa manampy koa ny toerana mahafinaritra mihetsika;
5. Ampiasaina betsaka amin'ny tranom-panjakana sy tsy miankina isan-karazany, toy ny toeram-pivarotana, hotely, tranon'ny birao, toeram-pizahan-tany, trano fonenana avo lenta, sns. dia: vatan'ny firafitra vy, ascenseur karazana fitaratra mitsivalana ivelany rindrina fitaratra ivelany, ary serivisy firavaka manohana ny ascenseur mifandraika amin'izany. Ahitana trano fandraisam-bahiny lehibe, toeram-pivarotana, tranon'ny birao, orinasam-pampandrosoana trano, banky, tranoben'ny fitantanan-draharaham-panjakana, efitrano fampirantiana, fidirana sy fivoahana ambanin'ny tany, sekoly, villa tsy miankina ary toerana hafa.
Ny ascenseur fitsangatsanganana dia misy fiara izay mandeha eo anelanelan'ny andalana roa amin'ny lalan-kaleha ho an'ny torolàlana. Ny habe sy ny firafitry ny fiara dia mety amin'ny mpandeha hiditra sy hivoaka na hampiditra entana. Fomban-drazana ny mandray ny ascenseur ho toy ny teny ankapobeny ho an'ny fiara fitaterana mitsangana amin'ny trano na inona na inona fomba fitondrany. Raha ny haingam-pandeha nomena isa dia azo zaraina ho an'ny mpanamory hafainganam-pandeha ambany (ambanin'ny 1 m / s), ny ascenseur haingana (1 ka hatramin'ny 2 m / s) ary ny haingam-pandeha haingam-pandeha (ambonin'ny 2 m / s). Nanomboka nampiasaina teo anelanelan'ny taonjato faha-19 ny ascenseur Hydraulika ary mbola ampiasaina amin'ny tranobe midina izy ireo.
Ny ascenseur maoderina dia mazàna amin'ny milina fanamafisam-peo, milina varavarana, lalamby mpitari-dalana, fitaovana fandanjana volo, fitaovana fiarovana (toy ny limiter hafainganana, fitaovam-piarovana sy buffer sns.) Ireo faritra ireo dia apetraka ao amin'ny efamira sy ny efitranon'ny motera. Amin'ny ankapobeny dia ekena ny fifindran'ny tady vy tariby. Ny tady tariby dia mihodina manodidina ilay fehezam-bary mitazona, ary ny tendrony roa dia mifandray amin'ny fiara sy ny lanjany. Ny motera no mitondra ilay fitaratra mitazona azy hiakatra sy hidina ny fiara. Ny ascenseur dia takiana mba ho azo antoka sy azo antoka, avo lenta ny fahombiazany, haavo haingam-pandeha ary ahazoana aina mitaingina. Ny masontsivana fototry ny ascenseur dia misy ny laharam-pahamehana, ny isan'ny mpandeha, ny hafainganam-pandeha, ny haben'ny fiara ary ny karazana fiakarana.
Ny rafitra fanamafisam-peo dia misy motera mihetsiketsika, sheave fitosahana, tady tariby mitazona, reducer, frein, base machine, ary kodiarana manakana. Ny fehezam-bidy dia napetraka eo amin'ny andry mitondra enta-mavesatra. Ny milina fanamafisana ny ascenseur dia ny mekanin'ny fiasan'ny ascenseur. Izy io dia mitondra ny enta-mavesatra rehetra (enta-mavesatra mavesatra sy enta-mavesatra) an'ny singa mihetsiketsika miverina amin'ny alàlan'ny fehezam-bidy amin'ny alàlan'ny andry mitondra enta-mavesatra. Ireo andry mitondra enta-mavesatra dia mandray ny firafitra vy-vy.
Ny rafitra fanonerana fampiatoana dia ao avokoany ampahany amin'ny rafitry ny fiara sy ny lanjany, ny tady fanonerana, ny fihenjanana sns. Ny fiara sy ny lanjany dia ny singa lehibe amin'ny ascenseur mihazakazaka mitsangana, ary ny fiara dia kaontenera hitondra mpandeha sy entana.
Ny rafi-pitantanana dia misy singa toy ny lalamby fitarihana sy kiraro fitarihana hitarika ny fivezivezena amin'ny fiakarana avo lenta amin'ny fiara sy ny lanjany.
Ny rafitra elektrika dia ny rafitra fanaraha-maso ny ascenseur, ao anatin'izany ny boaty fanaraha-maso, boaty antso ivelany, bokotra, mpifandray, mpampita, ary mpanara-maso.
Fitaovana fiarovana fetra hafainganam-pandeha, fitaovana fiarovana, buffer, fitaovana fiarovana isan-karazany, sns.
Famolavolana sy fanamboarana vy hoistway an'ny fitsangatsanganana ascenseur. Araka ny haben'ny sary injeniera sivily amin'ny ascenseur fitsangatsanganana, ny vy tena andry fijerin'ny ascenseur fitsangantsanganana ambanin'ny tany 6 dia mety 150mm × 150mm × 0,5mm vy metatra toradroa, ary ny hazofijaliana dia 120mm × 80mm × 0,5mm vy vy toradroa. Ho an'ny famolavolana ny efitranon'ny solosaina, araka ny fenitra nasionaly, ny haavon'ny rihana ambony ambony amin'ny efitry ny milina dia tsy maintsy farafahakeliny 4,5 metatra amin'ny haavony mazava. Ny tsara indrindra dia ny mampiasa takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny plastika kely eo an-tampon'ny firafitra vy hiarovana ny mpampiantrano.
Teo aloha: Escalator anatiny sy ivelany
Manaraka: Elevator mpandefa zotram-pifandraisana tsy mifangaro